Abaphumeleleyo be-Inspired 2009-Geofumadas
Ikhaya/ezintsha/Abaphumeleleyo be-Inspired 2009
Le yinguqulelo yokuqala kwifomathi ephefumlelweyo yento eyayisakuba yiBentley Enikwe Amandla (BE Amabhaso). Isukile kwii-axes ezingumxholo yaya kwiindlela ezilungileyo zokuziphatha, igxila ngakumbi kukudibana kunenkqubo ngokwayo. UBentley sele eyikhuphele uludwe olusemthethweni lwabaphumeleleyo, Andiyi kunika enye into kwingxelo.
Lo mbhiyozo wenziwa kwiWestin Charlotte, kunye nabathathi-nxaxheba abambalwa kunabanye emva kweminyaka utshintsho lwefomathi kunye nengxaki yezoqoqosho. Kodwa bekungekho nto iphantsi kwesi sizathu, nangona utshintsho kwinqanaba lokuziphatha lubonakala.Masikhumbule ukuba ngaphambi kokuba kuthiwe yigala, kwaye ababonisi babenxiba iziphoso; ngoku ibiyinto nje eqhelekileyo kwaye iinjineli ziziva zingcono.
Iimfono zenziwa kakuhle nguChris Barron, waqala ukucula i-parody ebizwa ngokuba Bentley Infraestructures Iphefumlelweyo, kuhle kakhulu; ihamba kunye nePowerPoint ehlekisayo eyenza isishwankathelo sombono omtsha womntu ekudalweni kweziseko zophuhliso, rhoqo kwiingqungquthela ezikhethiweyo.
Kwakukho abaxumi abahlukeneyo, kubandakanya uSodolophu waseCharlotte kunye nabaphathi beBentley, ngokunxulumene nozinzo lobungcali, uMbutho, iNdalo kunye nokuyila; ekuthi ngenxa yayo kuqondwe izinto ezithile. Ngaphambi nje kokukhupha ibhaso lokuqala, uChris wazixelela isiqhulo ngomahluko phakathi kweBhola kunye neBhola ekhatywayo, uku ukuyivula Ukungabongi ukuba uninzi lweengcali zisebenzela iprojekthi, zisebenza ixesha elongezelelekileyo, zingalali ebusuku kwaye zineentloko ukuze abaphathi babo bathabathe ihlombe ngebhaso elixabisa i $ 300. Ngasemva, inkqubo yokuvelisa ibhaso elitsha yaziswa, ukusuka kuyilo lwayo olusisiseko lwe-3D, ukujija, ukuluma, ukucokisa, ukuphuma kwiprinta ye-3D, kwinkqubo yokutyumza kwiworkshop yokunyibilikisa isinyithi.
Ekugqibeleni zaphela ngokubaluleka software anganika umzekelo ishishini apho abaphumeleleyo ezininzi, iprofayili ibhaso isiqingatha yabonisa, ukuthatha omnye 8 waza wabonakala iglasi usoloko ndatshaya in green, unobumba V kwaye i ngesiqubulo: Kwakungeke kwenzeke ngaphandle kweV8i.
Nangona amalungu abezindaba indawo Phendla, Ndahlala etafileni kunye amakhwenkwe yeSixeko Cáceres zeza kankqoyi, sikhatshwe nomphathi-akhawunti kwi Bentley Spain kunye etafileni enye amavo ezimbini Microstation: omnye wabo mnyusi Microstation Comunity (TMC) ngoku opacándose kunye 2.0 web retouching Yibumbano.
Ndandincoma abantwana baseCáceres, ndiyathanda ukugubha nabo nje ngelo xeshaKodwa umba mhlaba ngelithi uyilo Honduras (2004 kunye 2005 Kwanikezelwa) kwaye El Salvador, yaye kabini abatyunjiweyo ezi ngongoma ngaphaya yokuthelekisa ukuba phantse naziphi na iinzame ukuloyisa kuya kuba yimfuneko ubungqina Bentley Cadastre, KwiGeospatial Server kunye neProjekthi ehlakaniphile geofumado I-imodeli.
Emva komcimbi wokubonga, watyhila iqela eliphilayo gringolandiaNgelixa konke okunye bekuzinikezelwe ekujikeni kwiisendwitshi ezimnandi kunye neyona nto iveliswa yiwayini. Ndinexesha lokuncokola noAlfredo Castejón, waseMexico kunye nomnye wabaphathi endandenze udliwanondlebe nabo kulo nyaka uphelileyo. Bandinqwenelela amathamsanqa nge Inkathazo eyenzekayo eHonduras kunye ne-roulette yosuku olulandelayo kwiNdebe Yehlabathi apho uEl Salvador, Costa Rica kunye ne-United States babandakanyeka.
Emva koko ndaya kuphumla, ndava ukuba uMichelletti noZelaya bavuma ukubeka UReinaldo Rueda Njengomongameli wethutyana kwaye ndavuka ndinamaphupha amabi ababemnika wona njengebhaso lokuthuthuzela. Emva kwethutyana ndaqonda ukuba luphawu oluhle lokuba iHonduras iyakulungela iNdebe yeHlabathi kwaye ekugqibeleni obu bugeza buza kuphela kungekudala.
uninzi luhlala eMelika, apho iBentley inesikhundla esomeleleyo kwinqanaba lobunjineli kunye nezityalo, ngaphandle kweBrazil, iSpain, iUnited Kingdom, iVietnam, iMadagascar kunye neIndiya baphumelela amabhaso. Olu luluhlu lwamabhaso anikiweyo:
I-WSP Finland Ltd - Ngyuen Van Troi-Tran Thi Ly Bridge (Viyethnam)
I-NBBJ - Isibhedlele saseMiami Valley (I-USA)
Cadastre kunye nophuhliso lwendawo
Iinjineli ze-KASL Consulting - Isikhululo somlilo seMetro No. 29 (I-USA)
I-Campus, ii-airports kunye nokufakwa kwezempi
I-CH2M HILL - IsiGaba se-1: I-O'Hare yoLungiso lweNkqubo (I-USA)
IiNethwekhi kunye noqhagamshelwano
Iinkonzo zokuQinisekisa ngokuCwangcisa, Inc. - Isixeko sasePort St. Lucie Fiber Optic Network Design (I-USA)
Imayini kunye nezitye
I-Hatch Africa (Pty) Ltd - Iprojekthi ye-QMM i-Ilmenite (Madagascar)
Abaqulunqi beCianbro - i-Motiva Incresion Project Project (I-USA)
Energoprojekt Gliwice, SA - PS20 Power Plant Plant (Spain)
I-Transit kunye neetroliwe
Iiparsons Brinckerhoff - I-Central Phoenix / i-East Valley Rail Rail System (I-USA)
I-Creighton Manning Engineering, i-LLP - Indlela ye-85 yeSlingerlands Bypass Extension (I-USA)
I-Huntsville IiNkonzo - Ukuphunyezwa okuhlangeneyo kweProjekthi, i-Bentley Expert Designer, kunye ne-SAP (I-USA)
I-CDM - I-Casa Grande yokubuyisela amanzi kunye nokusetyenziswa kwakhona kweProjekthi (I-USA)
Amanethiwekhi amaninzi, amanzi namanzi
URhulumente waseMaharashtra, iNkonzo yoLondolozo lweManzi kunye noCoceko loLawulo lweNkunkuma (Indiya)
I-Mott MacDonald Ltd - I-Model Railway (I-USA)
Ukudibanisa amaqela omsebenzi
Ukutyala Coqueiros (I-USA)
I-Feilden Clegg Bradley Studios LLP - I-Worcester Library kunye neZiko leMbali (I-USA)
I-Edge Structures Ltd - iWimbledon Centre kwiNkundla yokuPhuthukiswa kwakhona kunye neNdawo eLawulayo (EUnited Kingdom)
Arc Akukho zinto zendawo
Siyabonga, uJuan, abantu abaninzi balindele.
Sawubona G! Ndiyathemba ukuba ujabulele umkhosi wokugubha ama-Inspired.
Makhe sibone ukuba le meko iphetha ekuphuculeni kwaye uMikhelettis noZelayas baqondane ngokulungileyo kubantu.
Ngethemba ukuba iphupha lomongameli wesikhashana uza kuzaliseka kwaye lo xinzelelo luya kuthatyathwa yinkxalabo eyenza nzima ngakumbi imihla ngemihla,
Ngokwezinto awachazayo, wayemkhulu ekutyeleleni e-United States.
CadExplorer, khangela uphinde ufake iifayile ze-CAD njengeGoogle